Atirishada Caanka Ah Tamannaah Bhatia Iyo Filimada U Diyaarsan 2017 – 2018 - Hablaha Media Network
Atirishada Caanka Ah Tamannaah Bhatia Iyo Filimada U Diyaarsan 2017 – 2018
HMN:- Atirishada Koonfur Hindiya caan ka ah Tamannaah Bhatia ayaan idiin heynaa filimada u diyaarsan xidigtaan una soo bixi doonaan sanadkaan 2017 iyo sanadka dambe 2018.
Tamannaah Bhatia inta badan shaqadeeda waxay u badan tahay sameynta filimada shirkada Kollywood (Tamil) iska leeyihiin sidoo kalena Telugu wey ku lug leedahay halka mararka qaar filimada Bollywood-ka wax ka jisho.
Hadaba aqristayaal Tamannaah Bhatia iyo filimada u diyaarsan ee la daawan doono 2017 iyo 2018 fadlan hoos kaga bogo:
Anbanavan Asaradhavan Adangadhavan (14 April 2017): waa filim Tamil ah waxaana wada jilayaan Silambarasan, Shriya Saran iyo Tamannaah.
Baahubali: The Conclusion (28 April 2017): waa filim Telugu/Tamil isku ah waxaana wada jilayaan Prabhas, Rana Dagubbati, Tamannaah Bhatia iyo Anushka Shetty.
Merisal (Sep 2017): waa filim Telugu/Tamil isku ah waxaana wada jilayaan Silambarasan, Tamannaah, Suman, Suman Shetty iyo Ram.
Queen Remake (2017): waa dib u sameynta filimka Queen asigoo Tamil ah waxaana hogaamiye ka ah Tamannaah waxaana la daawan doonaa dhamaadka sanadkaan.
Vikram 54 (2018): filimkaan dhawaan ayaa lagu dhawaaqay waana Tamil waxaana wada jili doonaan Super Star Vikram iyo Tamannaah Bhatia.
Rohit Shetty Next (2018): waa filim Bollywood ah waxaana wada jili doonaan Ranveer Singh iyo Tamannaah Bhatia.